Izinsalela zikatamatisi nopelepele zandisa ukukhiqizwa kwama-biogas | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Izinsalela zikatamatisi nopelepele zandisa ukukhiqizwa kwama-biogas
Adriana | | I-Biogas, Ezomnotho Wasekhaya
Ithimba lososayensi abavela ePolytechnic University of Valencia belikade lifunda futhi lihlaziya ukusetshenziswa kwe imfucuza yezolimo noma ngemikhiqizo ukwazi ukuthi baziphatha kanjani khiqiza ama-biogas.
Imiphumela abaphethe ngayo ukuthi upelepele uyakwazi ukukhulisa ukukhiqizwa kwama-biogas ngo-44%, okuwukuthi izingqungqa lokho kwakusebenzisa udaka oluvela ezingulubeni kuphela.
Utamatisi wenyuse umkhiqizo we i-methane igesi I-41%, peach kuphela i-28% ne-persimmon ayikhombisanga umehluko.
Ngale datha, izikali namaphesenti kungasungulwa ukuhlanganisa izinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene ukuze zisebenzise kangcono ukukhiqizwa kwe-methane nobuchwepheshe obusufakiwe.
Ngalolu lwazi, izitshalo ze-biogas zezimboni kanye namapulazi angasese ane ama-biodigesters Bazokwazi ukukhulisa umkhiqizo wabo ngaphandle kokusebenzisa izinto zokusetshenziswa ezilungile.
Akukhona okungahleliwe ukusebenzisa i-purines njengezinto zokusetshenziswa ze ukukhiqizwa kwamandla ngoba lezi zinsalela zezinto eziphilayo azinakusetshenziswa okuncane njengomquba ngakho-ke kukhona okweqile kwalesi sakhi kule ndawo. Umqondo ngukunikeza ukwelashwa okwanele nokonga imvelo kulokhu kudoti.
Ngakho-ke, umbuso kamasipala nezinye izinhlangano zasendaweni zifuna izicelo ezisebenzayo zokusebenzisa lesi sici, esinamandla aphansi okukhiqiza amandla kuphela njenge-biogas, ngakho-ke asizuzi.
Kepha uma i-slurry ihlanganiswe nezinsalela zezolimo ezithuthukisa ukukhiqizwa kwe-biogas, izosebenza kahle kakhulu futhi ibe nenzuzo.
Ezinye izivivinyo zesikali sangempela zisadinga ukwenziwa ukuze kube nemininingwane enembe kakhulu ngokuziphatha kukadoti, kepha lolu cwaningo lungasiza kakhulu ukwenza ngcono ukukhiqizwa biogas.
Kungaba inqubekela phambili enkulu ukukwazi ukuthola ifomula elifanele phakathi kwezinto zemvelo eziqinisekisa ukwenziwa okunenzuzo nokusebenza kahle kwama-biogas esikalini sendawo nesezimboni.
UMTHOMBO: Amandla avuselelekayo
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Ama-biofuels » I-Biogas » Izinsalela zikatamatisi nopelepele zandisa ukukhiqizwa kwama-biogas
Ulale kahle! lapho engingathola khona idatha eningi noma idokhumenti ekhombisa lolu hlobo locwaningo. Ngiyabonga
Izizathu ezi-5 zokuthenga ibhayisikili likagesi
Iwashi lesongo lokhuni